पत्रकारदेखि भागिन् अरबाजकी नयाँ गर्लफ्रेन्ड, अरबाजले बिहे गरेको लामो समयपछि श्रीमती मलाईकालाई डिर्भोस दिएका थिए – Etajakhabar
पत्रकारदेखि भागिन् अरबाजकी नयाँ गर्लफ्रेन्ड, अरबाजले बिहे गरेको लामो समयपछि श्रीमती मलाईकालाई डिर्भोस दिएका थिए
काठमाडौं, बलिउड अभिनेता, निर्माता अरबाज खान हालै बान्द्राको स्मोक हाउसमा एक युवतीका साथ भेटिए । ती युवतीले जब फोटो पत्रकारलाई देखिन्, उनी मुख लुकाउँदै गएर अटो रिक्सामा बसिन् । खासमा ती नारी को थिइन् भन्नेचाहिँ पत्ता लागेको छैन ।
अरबाज र उनकी पत्नी मलाइका अरोरा खानबीच गत वर्ष सम्बन्धविच्छेद भइसकेको छ । पत्नीसँग छुट्टिएपछि अरबाज गर्लफ्रेन्डका साथ हिँड्ने गरेको बताइन्छ । स्मोकी हाउसबाहिर पनि उनी गर्लफ्रेन्डका साथमा रहेको भारतीय मिडियाको दाबी छ । मलाइकासँग सम्बन्ध चिसिँदै गएका वेला अरबाज एजेक्जेन्ड्रा नामक विदेशी गर्लफ्रेन्डको प्रेममा रहेको खबर आएको थियो । त्यतिवेला अरबाजले आफू प्रेममा रहेको कुरा स्विकारेका थिए । त्यसैगरी, मलाइका पनि एकजना विदेशीको अफेयरमा रहेको गसिप छाएको थियो ।नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
डिभोर्सपछि अरबाज र मलाइकाको धेरै ठाउँमा, धेरैपटक भेट भइसकेको छ । उनीहरू छुट्टिएको भए पनि छोराका कारणले एक–अर्काबीच राम्रै सम्बन्ध रहेको बताउने गरेका छन् । खासमा मलाइकाको अफेयर अभिनेता अर्जुन रामपालसँग भएको र त्यही कारणले गर्दा अरबाजसँग छुट्टिएको भारतीय मिडियाले उल्लेख गर्ने गरेका छन् । मुख छोप्दै अटोमा लुकेकी ती नारी अरबाजकी नया गर्लफ्रेन्ड भएको मिडियाको दाबी छ । अरबाजले भने यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, पौष २०, २०७४ समय: १२:००:०२
प्रकाश सपुतको बेदना समेटिएको गीत ‘बोल माया’ किन धेरै लाइ रुवायो ? (भिडियो)
यि साना बालकको अनौठो प्रेम, बिछोडको पिडा सहन नसकेर गाए यस्तो मनछुने गीत
धेरै पछि रिमा र सुशिलको भेट : भेट हुँदा रिमालाई सुशिलको यस्तो अफर
राजकुमार ह्यारी र मेगनको विवाहमा प्रियंकाले लगाएको जुत्ताको ब्यापक चर्चा, कति लाखको थियो उनको जूत्ता ?
१० कक्षमा अध्ययनरत करिश्मा स्कुल ड्रेसमा यस्ती देखिइन्, तस्विर बने भाइरल